Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xariga ka jaray Iskuul laga furay Jazeera oo ay carruur Soomaaliyeed ka heli doonaan waxbarasho tayeysan.
Madaxweynaha oo munaasabadda ka hadlay ayaa yiri “Waxbarashadu waa aasaaska horumarka bulsho walba, carruurta Soomaaliyeedna waxey xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho tayeysan si ay u helaan mustaqbal iftiimaya. Waxbarashadu waa iftiin, rajo, iyo mustaqbal wanaagsan. Carruurteenna waa mustaqbalkii hoggaamiyeyaasha dalka.”
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa yiri “ Maanta waxaan rabnaa in dalka loo helo mashaariic fara badan oo dib loogu dhisayo dalka, sida mashaariicda waxbarasho, caafimaad, adeegyada bulshada iyo mashaariic shaqo loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhowaan waxaan Brussels la tagi doonaa Compat ay ku dhanyihiin mashaariicdii dalkan oo dhan dib loogu dhisi lahaa, si dalku horumar u gaaro.”
Dowladdu waxey ahmiyad gaar ah siisey waxbarashada oo muhiim u ah dalka Soomaaliya oo dib u soo kabanaya, oo carruurta intooda badan aysan helin fursad waxbarasho, waana sababta ay dowladu u leedahay hami ah in hal milyan oo carruur ah ay helaan waxbarasho.